Mondial Judo 2021: tsy nitsanga-menatra ireo solontena malagasy - ewa.mg
Mondial Judo 2021: tsy nitsanga-menatra ireo solontena malagasy
News - Mondial Judo 2021: tsy nitsanga-menatra ireo solontena malagasy
Naneho ny maha izy azy
ary tsy nikely soroka hatramin’ny faran’ny lalao nataony avy
ireo Judokas malagasy telo mianadahy, niatrika ny fiadiana ny
tompondaka eran-tany any Budapest Hongrie, omaly.
Naneho ny maha matihanina azy
tanteraka ary nikiry hatramin’ny farany ry Fetra sy ny ekipany
nanoloana ny mpifanandrina aminy avy nandritra ny lalao fiadiana ny
tompondaka eran-tany tanterahina ao Hongrie, omaly. Samy nanao ny
ainy tsy ho zavatra tamin’ny fifandonana nataony izy ireo ka ho
an-dRasoanaivo Razafy Laura manokana, nifandrina tamin’ilay
teratany uzbekistan, Khojieka Farangiz ny tenany nandritra ny lalao
voalohany. Efa voatanany sahala hatramin’ny fahataperan’ny ora
farany io mpifanandrina taminy io ka voatery niditra
tamin’ny fanampim-potoana farany na ny « golden score»
ny lalao ary teo no nahalavo an’i Laura. Niraraka teo amin’ny
fihodinana voalohany koa i Nomenjanahary Damiella rehefa
nifampitana tamin’i Billiet Sandrine avy ao Cap-vert. Ireo judokas
malagasy roa ireo izay samy tao anaty sokajy latsaky ny 63 kg
avokoa. Ho an’ny eo amin’ny sokajy lehilahy kosa, niondrika
nanoloana ny mpifanadrina amin’ny teo amin’ny lalao fihodinana
faharoa Ratsimiziva Fetra sokajy latsaky ny 81 kg. Tapitra teo
avokoa, noho izany, ny lalana ho telo azy mianadahy.
Mitohy ny ezaka ho an’ny
Na teo aza ny faharesena teo
amin’ireo telo mianadahy solontena malagasy tany Hongrie,
zava-dehibe eo amin’ny taranja judo ny zava-bitan’izy ireo .
«Mbola manana fotoana hivoarana misimisy kokoa ireo judokas
malagasy ireo noho izy ireo mbola anaty ny hatanorany
tanteraka », hoy ny filohan’ny Do judo, Rabeantoandro
Herimbola. Hita soritra araka izany fa ho lasa lavitra ny taranja
Judo malagasy, hoy hatrany izy.
L’article Mondial Judo 2021: tsy nitsanga-menatra ireo solontena malagasy a été récupéré chez Newsmada.
935 ireo tranga vaovao hatramin’ny asabotsy : nandavo olona 29 ny covid-19 tao anatin’ny herinandro
Miisa 29 ireo lavon’ny covid-19, nanomboka ny asabotsy 8 aogositra lasa teo ha­tramin’ny omaly. Nanamari­ka izany ny asabotsy sy ny ala­hady teo, nahitana olona miisa 13 indray lavo tao anatin’ny roa andro. Nidina ho telo sy iray ireo lavo taorian’izany ary niakatra ho efatra sy enina izany, ny 12 sy 13 aogositra teo. Izany hoe, ma­nodidina ny efatra eo ho eo isan’andro ny matin’ity valanaretin’ity, tao anatin’ny herinandro, eto amintsika.Nisy fidinany ny efatra andro farany Etsy an-daniny, miisa 935 ireo tranga vaovao, tao anatin’ny herinandro. Mbola lohalaharana amin’izany ny eto Analamanga. Na izany aza, nisy fidinana io fifindran’ny valanaretina io tato anatin’ny efatra andro farany. Latsaky ny 200 ireo tranga vaovao ta­min’izany. Miisa 115 ho an’ny 11 aogositra, 80 ny 12 aogositra, 125 ny 13 aogositra ary 121 ireo nifindran’ny valanaretina, omaly.Miisa 103 ireo marary mafy Nisy fiakarany be kosa an­efa ny «forme grave», tao anatin’ny herinandro. Tafa­ka­tra 103 izany ny alarobia teo raha miisa 98 izany ny talata. Nidina ho 85 sy 89 izany ho an’ny roa andro farany. Araka izany, tokony mbo­la hihatra avokoa sy hajaina ireo fepetra ara-pahasalamana manoloana ity va­la­na­re­ti­na ity eto amintsika.Synèse R.Antontanisa navoakan’ny CCO, omaly. Miisa 121 ireo mitondra ny tsimokaretina ka avy eto Analamanga ny 53, Vakinankaratra 9, Alaotra Mangoro 20, Matsiatra Ambony 3, Amoron’i Mania 8, Vatovavy Fitovinany 3, Boeny 11, Sofia 7, Diana 3, Anosy 4. Miisa 231 kosa ireo sitrana raha 89 ireo marary mafy. Niampy roa ireo maty ka tafakatra 164 izany izao ireo lavon’ny covid-19 eto amintsika. Miisa 50 969 ny fitiliana PCR vita raha 4 333 kosa ny fitiliana vita eo anivon’ny Genexpert. Miisa 13 643 ireo mitondra covid-19 eto Madagasikara hatramin’ny nisian’ny valanaretina raha 12 011 ny isan’ny olona sitrana. Mbola manaraka fitsaboana kosa ny 1468.L’article 935 ireo tranga vaovao hatramin’ny asabotsy : nandavo olona 29 ny covid-19 tao anatin’ny herinandro a été récupéré chez Newsmada.
Misaona ny FJKM sy ny katolika: Pasitera roa sy mompera iray nodimandry omaly
Banga ny tontolon’ny fiangonana. Nodimandry, omaly noho ny valanaretina covid-19 ny mpitandrina, Andriamparany Tina Jaona. Tsy niandry ela fa nalevina avy hatrany eny Belanitra Ankadikely ny nofomangatsikany. Tafiditra amin’ny fanarahana ny fepetra efa mahazatra napetraky ny fanjakana manoloana ity coronavirus ity izany.Mpitandrina eo anivon’ny FJKM Antsinanantsena Sabotsy Namehana ny tenany. Ankoatra izany koa anefa, mpitandrina mpanentana ny fandaharana antsoina hoe “Andon’ny maraina sy Masina ao am-poko” ao amin’ny RDJ 96.6 FM.Fandaminana isam-piangonanaAnkoatra izany, nodimandry, omaly koa ny mompera Theophile, avy amin’ny fikambanan-drelijiozy « Carmes » ary miasa any Moramanga. Lavo tahaka izany koa ny pasitera Raharijaona Jeremia, mitondra ny FJKM Ziona Manjakandriana. Navelina, omaly avy hatrany any amin’ny fasan-drazany any Imerintsiatosika.Synèse R.L’article Misaona ny FJKM sy ny katolika: Pasitera roa sy mompera iray nodimandry omaly a été récupéré chez Newsmada.
Tahotra amin’ny fivezivezena eny Ivandry : mitaky tsena ho an’ireo marary ao amin’ny LTP ny mponina
Mitohy ny ahiahin’ny mponina eny Ivandry. Mandehandeha eny amin’ny tsenakely fividianan’ny rehetra entana ny olona ao amin’ny LTP. Tokony hisy ny fepetra manokana ho an’ireo marary sy mpiasa ao amin’io toerana io. Nanao taratasy fangatahana amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny indray ireo mponina eny Ivandry, omaly. Tokony hisy tsena manokana ao amin’ny LTP ahitana ireo entana ilaina andavanandro. “Hato­kana mihitsy hiantsenan’ireo mpiasan’ny fahasalamana sy mpiasa mikarakara marary, ireo marary, mpanadio sy mpitandro filaminana ao amin’ny LTP Alarobia io tsena ao anatin’ny LTP io”, hoy izy ireo. Tsy tokony hivoaka na hiserasera amin’ny mponina eny Ivandry sy ny tsena fampiasan’ny mponina eny an-toerana ireo rehetra mihiboka ao amin’ny LTP rehetra ireo mba tsy hiparitahan’ny aretina, araka ny fangatahana ha­trany. Raha ny zava-misy amin’izao fotoana, mivoaka miantsena amin’ireo mpivarotra enta-madinika eny Ivandry ireo olona ao amin’ny LTP ka miteraka tahotra amin’ireo mponina izany satria heverina ny hiparitahan’ny aretina aterak’izany. Nanaovan’ny mponin’ Ivan­dry tsindrim-peo ihany koa ny tokony hijerena ny fantson-drano maloto ampiasain’ireo marary ao amin’ny LTP, izay tsy tokony hiparitaka ka mety hitera-doza ho an’ny manodidina.Fanadiovana isan-kerinandroTetsy an-daniny, mangataka ny hanaovana fanadiovana isan-kerinandro sy fandrarahana ranom-panafody matetika eny an-toerana ny mponina, mihorohoro tanteraka amin’ny fisian’ny marary mihaodihaody eny amin’ny LTP. Tokony harahi-maso isan’andro ihany koa ireo olona mifamezivezy ao anatin’ny fokontany, in­drindra ireo olona tsy mipetraka eny. Nitondra fanamarihana ny mponina eny Ivandry fa tsy misy resaka politika ny fangatahana ataon’izy ireo fa ho arofanina hisorohana ny fiparitahan’ny covid-19.Tatiana AL’article Tahotra amin’ny fivezivezena eny Ivandry : mitaky tsena ho an’ireo marary ao amin’ny LTP ny mponina a été récupéré chez Newsmada.
Fanadinana fitsapana teny amin’ny EPP: ny antsasa-manilan’ny mpianatra no nahazo 10/20
Nitsapa ny fari-pahaizan’ny mpianatra ao aminy koa ny EPP ho famaranana ny telo volana voalohany. Nidina ny fari-pahaizan’ny mpianatra, araka ny vokatra azo. Namarana ny telo volana voalohany tamin’ny fanadinana fitsapana ny EPP eto an-dRenivohitra sy ny manodidina ary hozaraina amin’ny ray aman-dreny amin’ny alalan’ny “porte ouverte”, ny faran’ny herinandro, ny vokatra azon’ny mpianatra. Ho an’ny EPP Antanandrano, Cisco Avaradrano, 60% tamin’ny mpianatra ho an’ny kilasy rehetra no nahazo salanisa 10/20 rehefa natao ny fanadinana. Ny kilasy 10 ème no tena nahitana lesoka betsaka, araka ny nambaran’ny talen’ny EPP, Rajoarihery Victor, omaly. Tsapa fa nilatsaka ny fari-pahaizan’ny mpianatra ary nisy voka-dratsiny ny fanapahana ela ny fampianarana noho ny fihibohana vokatry ny valanaretina Coronavirus. Momba ny fampihodinana ny asam-pampianarana amin’ny ankapobeny, miandry ny ampahany faharoa amin’ny caisse école avy amin’ny fanjakana ny mpitantana. Ho fanampiana ireo mpampianatra Fram “non sub” dimy am-perinasa, nanao tsipaipaika ho azy ireo ny mpampianatra sivy efa mpiasam-panjakana ao amin’ny EPP Antanandrano ahafahan’izy ireo miatrika ny fety. “Tsy maintsy mifanampy fa tsy afaka hijery fotsiny ireo mpiara-miasa izahay. Mazoto manohy ny asany rahateo izy ireo”, hoy ny tale. Ny kaominina Ankadikely Ilafy koa, nizara tohana ho an’ny mpampianatra 86 mitsinjara amin’ny Zap telo. Nahazo ny anjarany koa ireo mpiandry ny sekoly.Betsaka ireo mpianatra tsy tonga, omalyHo an’ny EPP sasany, namarana ny fandaharam-pianarana tsy vita ny taom-pianarana 2019-2020 nandritra ny telo volana voalohany ny isan-dakilasy ka fanadinana fitsapana namaranana izay ny natao nialoha ny fidirana tamin’ny fialan-tsasatry ny Noely. “50% ny isan’ny mpianatra, nahazo salanisa 10/20 izay azo ambara fa ratsy”, hoy ny talen-tsekoly. Mbola mavesatra ny fanarenana miandry ny mpanabe. Efa niditra amin’ny fandaharam-pianarana vaovao ny kilasy rehetra ary hotohizana amin’ity fiandohan’ny telo volana faharoa ity. Niditra omaly ny EPP rehetra fa mbola betsaka anefa ireo ankizy tsy tonga nanatrika ny fampianarana, araka ny fanazavany ihany. Mandra-piandry ny fanampiana avy amin’ny fanjakana momba ny karaman’ny mpampianatra Fram “non sub” enina miasa ao amin’ny EPP, ny sekoly no miezaka mikaroka vola hanampiana azy ireo aloha.Vonjy A.L’article Fanadinana fitsapana teny amin’ny EPP: ny antsasa-manilan’ny mpianatra no nahazo 10/20 a été récupéré chez Newsmada.
Nomarihina tamin’ny fomba manetriketrika ny « Taombaovao Malagasy 2021 Fidiovam-Pirenena (13-14 martsa) » teo ambany fiahian’ny Andriana RANJEVA Raymond, Andriambenimerina, mpitarika ny Antenimieran’ny Andriana Merina AAM, ny Printsy Rina TELESPHORE, Atoa RANDRIANJATOVO Henri, Filohan’ny Trano Kolotoraly Malagasy, ary ny Fikambanana Taranaka Ambohidrabiby, tarihin’ny Filohany ny Andriana ANDRIAMBOLOLO-NIVO Rabetrano. Nahazo fanasana ofisialy hanatrika io fankalazana io ny CFM. Nirahina hamaly izany fanasana izany Atoa isany MAKA Alphonse, Filohan’ny CFM, sy RAZAKA Oliva Mpanolotsaina faritra Analamanga. Tontosa ny sabotsy 13 martsa ny fomba amam-panao malagasy dia ny « AFO TSY MATY » sy ny « ANDRO TSY MATY ». Tontosa nandritra izany ny Dobodobok’aponga sy feon’anjomara ; fandrehetana ny AFO TSY MATY ; hiragasy sy lalao isan-karazany ; harendrina ; safo rano (fandroana) ; loabary an-dasy ; ary tsinjaka mandoaka ny alina. Omby volavita. Ny Alahady tamin’ny 10 ora no nifamotoana teo amin’ny kianjan’ny Rovan’Ambohidrabiby ny solontenan’ny vahoaka malagasy sy ny irak’Andriana rehetra avy amin’ny lafivalon’ny nosy. Tazana teny koa ny solontena Silamo. Natomboka tamin’ny « Sorona omby » sy « Fafy rano », tarihina sy tanterahan’Antehiroka izany. Ny Mpitandrina FJKM Ambohidrabiby no nanao tonom-bavaka. Taorian’izany vao niroso tamin’ny kabary sy lahateny samihafa nelanelanin’ny seho ara-javakanto nampitolagaga ny rehetra nanatrika. Fihavanana. Niangaviana am-panajana handray anjara fitenenana ny CFM, ka niroso tamin’izany ny solontena miralahalahy notarihin’ny Filohan’ny CFM. Kabary fohy nefa mafonja no nalahatry ny Filoha MAKA Alphonse, koa rehefa vita ny fifanatsafana noho ny taombaovao malagasy sy ny fisaorana ny mpanasa dia ireto teboka treo manaraka ireto no notsindriany : Fanomezana hasina ny soatoavina sy kolontsaina malagasy izay hafa noho ny an’ny rehetra erantany (endémique), tsy hatakalo tsy hamidy vola. Fitandroana ny firaisankinam-pirenena, izay mihamarefo ary misy miezaka manakorontana avy any ivelany sy eto an-toerana. Fandrosoana tolokevitra avy amin’ny CFM hanaovana ny Fihavanana malagasy ho isan’ny harentsaina tsy azo tsapain-tanana UNESCO, ho fanampin’ny haitao zafimaniry. Nankasitraka. Naneho imaso ny fifaliany ny rehetra ary nampita ny fankasitrahany io teboka fahatelo farany io tamin’ny Mpanolotsaina Analamanga ny Profesora RANJEVA Raymond, Filohan’ny Akademia Malagasy, sy ny Profesora ANDRIAMBOLOLO-NIVO Rabetrano, Filohan’ny Fikambanana Taranaka Ambohidrabiby. Nanindry tamin’ny kabary nataony koa ny Andriana merina fa ny toetsaina no maha Andriana, ka ny teny faneva nofidiany ho amin’izany dia ny hoe « DIAKONA » ny Andriana, izany hoe « Mpanompo ». Ka manompo vahoaka fa tsy manavakavaka na iza na iza ny Antenimieran’ny Andriana Merina. Nitohy tamin’ny « Tatao » (vary amin-dronono tondrahan-tantely), sy fanateran-kasina (rakitra manodidina) ary « Zara-hasina » (fizarana salohim-bary) ny lanonana. Nisy fiaraha-miala hetaheta sy hiragasy teny anelanelam-potoana ary nofaranana tamin’ny fizarana nofon-kena mitam-pihavanana izany. Razaka Oliva Cet article TAOMBAOVAO MALAGASY : Nahazo fanasana ny CFM est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article TAOMBAOVAO MALAGASY : Nahazo fanasana ny CFM a été récupéré chez Délire Madagascar.
Firaisamonina sivily : “Inona ny mbola itanana ny hamehana ara-pahasalamana?”
“Miroso mankany amin’ny famahana tanteraka ny fihibohana ny fepetra raisin’ny governemanta ankehitriny. Raha jerena ny zava-misy toekarena sy sosialy, ireo famerana samihafa takin’ny hamehana ara-pahasalamana, ny fameran’ny fitondrana eo amin’ny lafiny politika sy momba ireo fahafahan’ny olom-pirenena: manontany izahay ny antony mbola itazonana ny hamehana ara-pahasalamana.“Io ny fanambaran’ny firaisamonina sivily maromaro, ny faran’ny herinandro teo: “Enim-bolana aty aoriana, aiza ho aiza ankehitriny ny fametrahana ny mangarahara amin’ny fiatrehana ny Covid-19?” Anisan’ny manao sonia izany, ohatra, ny CCOC, ny Hetsika Rohy, ny MSIS Tatao, ny ONG Ravintsara, ny TI-MG…Mitaky rafitra amin’ny sehatra marolafy…Takin’izy ireo, ohatra, ny tokony hisian’ny rafitra voalaza ao amin’ny Drafitra amin’ny sehatra marolafy amin’ny fahamehana. Antoky ny fandraisana andraikitr’ireo mpisehatra amin’ny ady amin’ny Covid-19 sy ny fanarenana ny toekarena izany. Eo ny komity fakan-kevitra, ny rafitra iombonana iadiana amin’ny kolikoly, indrindra ny komity mpitondra. Mbola tsy natsangana ireo nefa anisan’ireo andrin’ny ady amin’ny Covid-19.Eo koa ny fampidirana sy ny fanomezana fahefana ireo sehatra samihafa hanampy amin’ny fametrahana ny ady amin’ny Covid-19. Efa naneho ny fahavononany hiditra ho mpikambana amin’io komity io ny sehatra tsy miankina sy ny firaisamonina sivily hahazoana mitondra fanatsarana sy tolo-kevitra amin’ny fomba araka ny lalàna.R.Nd.L’article Firaisamonina sivily : “Inona ny mbola itanana ny hamehana ara-pahasalamana?” a été récupéré chez Newsmada.
Nifarana ny 12 jona 2021 ny Fikaonandoha lehibe ifotony ho fampandrosoana ny faritra atsimon’i Madagasikara. Maro ny lohahevitra sy ny lafin-javatra nodinihina sady notapahina fa hotanterahina.Tapaka nandritra ny fikaonandoha ho an’ny fampandrosoana ny tapany atsimon’i Madagasikara, ny paikady mifanaraka amin’ireo sehatrasa tsirairay hoentina hamahana ny olana amin’ny lafiny sosialy sy toekarena any amin’ireo distrika rehetra ao anatin’ny faritra Anosy sy Androy.Vahaolana ho an’ny tsy fisian’ny rano any atsimo ny fitarihan-drano lehibe amin’ny alalan’ny fantsombe. Hoentina hanondraka ny veralan-tany hamokarana, ary misy koa ho an’ny rano fisotro. Hampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana izany hanatrarana ny tanjona fahavitan-tena ara-tsakafo araka ny veliranon’ny filoha Rajoelina. Eo koa ny fananganana toeram-pitsaboana hanatsarana ny lafiny fahasalamana.Atomboka amin’ny tetibolam-panjakanaAnisan’ny nisongadina tamin’ity fikaonandoha ity koa ny fanarenana ireo lalam-pirenena, ny RN 13, ny RN 10 ary ny RNT 12 A. Eo koa ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fandriampahalemana, ny fananganana indostria hanodina ny vokatra any an-toerana, sns.Nambaran’ny filoham-pirenena, fa hatolotra ireo mpiara-miombona antoka sy ny mpamatsy vola ireo paikady novolavolaina. Atomboka avy hatrany kosa ny tetikasa azo tanterahina avy amin’ny tetibolam-panjakana, satria tsy afaka miandry ny fampandrosoana ny faritra atsimo. “Napetraka ny fanamby ary isika rehetra no hiaraka hanova ny tantaran’ny faritra atsimo sy Madagasikara manontolo”, hoy ihany izy.Njaka AndriantefiarinesyL’article Hiova ny tantara: hifantohana ny fampandrosoana ny faritra Anosy sy Androy a été récupéré chez Newsmada.